Heshiiskani ayaa waxaa uu dhigayaa in tababarro la siiyo bahda waxbarashada si ay isku bad baadiyaan haddii ay dhibaato timaado, maaddaama inta badan bulshada ay yihiin bahda waxbarashada, sidoo kale waxaa uu dhigayaa in haddii uu shil dhaco hay’adda gar gaar ee Amiin Ambulance ay ahmiyad gaar ah siiso bahda waxbarashada oo la aaminsanyahay in ay yihiin dadka ugu badan ee bulshada oo dhibaatooyinka soo gaarto.
“Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta la kulanka mas’uuliyiinta Hay’adda gar gaarka deg dega ah, iyo in aan heshiikan kala saxiixanno, waxaan rabnaa in tabaabarro la siiyo bahda waxbarashada si ay isku badbaadiyaan haddii uu shil dhaco, marka waxaan rajaynayaa in heshiiskani uu waxbadan soo kordhin doono”. Ayuu yir Wasiirka waxbarashada.
Dhanka kale madaxda hay’adda gaadiidka gurmadka deg dega ah ee Amiin Ambulance ayaa soo dhaweyey hadalka wasiirka waxbarashada, iyagoo ka mahadceliyay la kulanka wasiir C/raxmaan Daahir Cusmaan, waxeyna sheegeen in ay fulin doonaan heshiiskaasi.
Previous articleCiidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed oo gacanta ku dhigay deegaano kale oo gobolka Baay ka tirsan “Sawirro”
Next articleWasiir Yariisoow ” Waxaa jirta qaswadayaal diiddan in wadankan uu horumar gaaro”